कसले हाम्रो कार्यहरु निर्धारण गर्दछ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
लेख > टोमी Tkach द्वारा > जसले हाम्रो कार्यहरू निर्धारित गर्दछ
कसले हाम्रो कार्यहरू निर्धारण गर्छ?
हामी मध्ये धेरैले यो दृष्टिकोणलाई प्रेम गर्दछौं कि हामी हाम्रो जीवनको नियन्त्रणमा छौं। हामी हाम्रो घर, परिवार, वा वित्त मा अरू कसैलाई बताउन चाहँदैनौं, यद्यपि यो गलत छ भने कसैलाई दोष दिन खुशी छ। जब हामी सोच्छौं कि हामीले एउटा विशेष परिस्थितिमा नियन्त्रण गुमाएका छौं, हामी असहज र डराउँछौं।
मेरो विचारमा जब हामी केही बाइबल अनुवादहरू र केही पुस्तकहरू पढ्छौं जुन हामी पवित्र आत्माको अगुवाईमा हुनुपर्दछ, हामी असहज महसुस गर्छौं। मलाई थाहा छ कि परमेश्वर, एक अतिरंजित अर्थमा, आफ्ना सबै सृष्टिहरूमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। उहाँसँग जेसुकै गर्न सक्ने शक्ति छ। तर के उसले मलाई "नियन्त्रण" गर्छ?
यदि उसले गर्छ भने, यसले कसरी काम गर्दछ? मेरो तर्क यस प्रकारले जान्छ: मैले येशूलाई मेरो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरें र परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन दिएदेखि म पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छु र पाप गरेको छैन। तर मँ अझै पापी हुँ, म उनको नियन्त्रण मा हुन सक्दैन। र, यदि म त्यसको नियन्त्रणमा छैन भने, तब मसँग मनोवृत्ति समस्या हुनुपर्दछ। तर म वास्तवमै मेरो जीवनको नियन्त्रण दिन चाहन्न। त्यसैले म एक दृष्टिकोण समस्या छ। यो रामरमा पावलले वर्णन गरेको कुटिल सर्कलसँग एकदम मिल्दोजुल्दो छ।
पवित्र आत्माले हामीलाई नियन्त्रण गर्दैन; ऊ कहिल्यै हिंसाको प्रयोग गर्दैन। उहाँतर्फ समर्पण गर्दा उहाँ हामीलाई बिस्तारै डोides्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा शान्त र कोमल आवाजमा बोल्नुहुन्छ। यो उहाँलाई जवाफ दिन पूर्ण रूपमा हामी माथि छ।
हामी आत्मामा छौं जब परमेश्वरको आत्मा हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ (रोमी::))। यसको मतलब यो हो कि हामी आत्मा अनुसार बाँचिरहेका छौं, यसका साथ हिंड्छौं, परमेश्वरका चीजहरूको ख्याल राख्छौं, हाम्रो जीवनमा उहाँको इच्छामा समर्पण गर्दछौं र उहाँद्वारा निर्देशित हुन्छौं।
हामीसँग आदम र हवाले जस्तै जीवन छनौट गर्न सक्दछौं वा हामी मृत्युलाई रोज्न सक्छौं। परमेश्वर हामीलाई नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्न। ऊ मेशिन वा रोबोट चाहँदैन। हामीले ख्रीष्टमा जीवन छनौट गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ र उहाँको आत्माले हामीलाई जीवनभर डो guide्याउन दिनुहुन्छ। यो पक्कै पनि राम्रो छ किनकि यदि हामीले सबै बिग्रेर पाप गरेका छौं भने हामी यसको लागि परमेश्वरलाई दोष दिन सक्दैनौं। यदि हामीसँग छनौट छ, तब हामीसँग आफैंलाई दोष दिन को लागी बाहेक कोही छैन।